Ngabe uyazi umehluko phakathi kwe-tin can ne-aluminium can? Abantu abaningi badidekile phakathi kwamathini wamathini kanye ne-aluminium futhi bayisebenzisa ngokushintshana. Njengoba kunokusetshenziswa okuningi kwawo womabili amathini, ukusetshenziswa okuvame kakhulu ukulondolozwa nokuqukethe ukudla. Amathini namathini we-aluminium avikela ukudla emoyeni nasekukhanyeni. Esinye isizathu sokusebenzisa kwabo kabanzi ukuthi zinokuphinda zisebenze futhi zihlala isikhathi eside. Yize womabili amathini asetshenziselwa izinhloso ezifanayo, awafani. Womabili amathini akhiqizwa kusetshenziswa izinto ezahlukahlukene, anezakhiwo ezihlukile, nezindleko ezahlukahlukene zokukhiqiza.
Lokhu okuthunyelwe kuqokomisa umehluko phakathi kwamathini we-aluminium namathini.
Amathini wamathini asetshenziswa njengesitsha sokugcina isikhathi eside kakhulu. Ngo-1810, itini lalinelungelo lobunikazi ngenkathi i-aluminium isetshenziswa ngo-1965.
Ungayithola Kanjani Tin?
I-tin iyinto yensimbi yecrystalline esebenza ngokushisa kwamakamelo. Kutholakala kumaminerali, i-cassiterite; lokhu kuyinhlanganisela ye-oksijini ne-tin. Inqubo yokucwilisa i-tin yenza iphelele ekukhiqizeni. I-Tin iyinto enqabile njengoba ibalwa ku-49 ohlwini lwezinsimbi oluningi kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, itini aliyona into ewonakalisayo, liwenza ube muhle kakhulu amathini. Kulezi zinsuku, i-tin ingenziwa ngensimbi nge-plating encane ye-tin. Lokhu ukuvimbela insimbi ukuthi ingasebenzi.
Itholakala kanjani i-Aluminium?
Ngokuphathelene ne-aluminium, kuyinto yensimbi efana ne-tin. Umehluko ukuthi i-aluminium itholakala ngobuningi futhi ibalwa ku-3 ohlwini lwensimbi oluningi kakhulu. Ukuqhekeka komhlaba kuqukethe i-aluminium engu-8.2% ne-0.001% tin. Uma kukhulunywa ngokuhlaziya, kuyinselele ukucwilisa i-aluminium futhi iyatholakala ngokuxutshwa kwendalo. Isibonelo, i-aluminium oxide ne-potassium aluminium sulfate.
Kuyo yonke le minyaka, izinqubo eziningi zokucwengisisa zisetshenzisiwe. Izitini ze-aluminium zenziwa kusetshenziswa ama-alloys e-aluminium. Ama-alloys aziwa ngokuba alula futhi aqine.
Uma kukhulunywa ngokuthatha isinqumo sokuthi yikuphi okungcono, kunzima ukwenza isinqumo sokugcina. Izitini ze-aluminium zilula ngesisindo kunezitini, kepha amathini wamathini ahlala isikhathi eside kunawo. Amathini ka-Aluminium ayasebenza uma kuziwa ekusebenzeni kabusha. Izindleko zokusebenzisa kabusha i-aluminium zingaphezu kwenele ukumboza izindleko zokufaka kabusha amathini nokuqoqa amathini we-aluminium.
I-Aluminium yi-9th izinto eziningi kakhulu ezitholakala yonke indawo emhlabeni. Lokhu kusho ukuthi ngeke kubize ukuzothuthukisa. Njengoba i-tin iyinsimbi engavamile, kuyabiza ukuyisebenzisela izinto zansuku zonke. Uma kukhulunywa ngombala we-aluminium can, ungumbala omhlophe kanti itini linombala onsomi we-silvery.
Ekugcineni, amathini womabili alungile, kepha i-aluminium ingcono ngoba ingakhiwa ngendlela engabizi. Uma ufuna amathini amahle we-tin, I-Yicheng yigama okufanele uncike kulo. Besinikeza amathini asezingeni eliphakeme kakhulu wamathiya ngobuningi nemiklamo ehlukahlukene.
November 1, 2018 /0 Amazwana/by acslock
https://www.tincanpacking.com/wp-content/uploads/2019/11/gift-packaging-wholesale-2.jpg 500 500 acslock https://www.tincanpacking.com/wp-content/uploads/2019/11/favicon-1-300x60.png acslock2018-11-01 08:42:052019-11-27 08:48:50Okungcono: Tin Can Vs Aluminium Can
Izici Eziphezulu okufanele Zicabange Lapho Kuthengwa I-Tin Can Ungayenza Kanjani I-Tin Can Lantern?